ကြိုတင်အပူဖြစ်စဉ်ကိုဂဟေများအတွက် induction အပူစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချစက်။
စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်း အအေး - ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စက်တပ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်သောသတ္တုများအတွက်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချရန်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချခြင်းလုပ်ငန်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
induction အပူအပူစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာ ferrous သတ္တုစပ်နှင့်သံမဏိသတ္တုစပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်လည်ပတ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့သောကြိုတင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များမှဖြစ်ပေါ်လာသောအတွင်းပိုင်းကျန်ရှိသောဖိအားများကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းမှ လွဲ၍ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုသည်လက်မခံနိုင်သောပုံပျက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နှင့်ပစ္စည်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်သည့်ဖိအားပေးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းစသောပြsufferနာများဖြစ်နိုင်သည်။ တီ သူကကုသမှုပစ္စည်းအဆောက်အ ဦ များသို့မဟုတ်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများအတွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးနိမ့်သောအပူချိန်ကန့်သတ်ထားသည်။
အအေး - ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စက်တပ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်သောသတ္တုများအတွက်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချရန်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချခြင်းလုပ်ငန်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့်သတ္တု၏ဖိစီးမှုများသည်မလိုလားအပ်သောအတိုင်းအတာအပြောင်းအလဲများ၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ အချိန်မတန်မီပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားသည့်အချိန်တွင်အစိတ်အပိုင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုချေးခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမလုပ်မီတင်းတင်းသောရှုထောင့်လိုအပ်ချက်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများသည်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဂဟေဆော်ထားသောအပိုင်းများကိုစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်အပူပေးစနစ်ဖြင့်တင်းမာမှုကင်းစေနိုင်သည်။
1. ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅၀ မှ ၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကုသမှုသည်မာကျောမှုအားသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲမာကျောပြီးနောက်ဖိအားများကိုသက်သာစေသည် (ဥပမာ - အမာခံအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဝက်ဝံစသည်):
၂။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၆၀၀ မှ ၆၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကုသမှု (ဥပမာ - ဂဟေဆော်ခြင်း၊ စက်စသည်ဖြင့်) သည်လုံးဝစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည်။
သံထည်မဟုတ်သောအလွိုင်းများသည်အပူနှင့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေသည်။ အသက်အရွယ် - ခိုင်မာစေသည့်အလွိုင်းများသည်အိုမင်းသောအပူချိန်အောက်ရှိစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်ကန့်သတ်ထားသည်။
Austenitic သံမဏိများသည်ဖိအား ၄၈၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက် (သို့) ၉၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင်လျော့နည်းစေသည်။ တည်ငြိမ်မှုမရှိသောသို့မဟုတ်ကာဗွန်နိမ့်မဟုတ်သည့်အဆင့်များတွင်ချေးသည့်ခံနိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချပေးသောအပူချိန်ဖြစ်သည်။ 480 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ကုသမှုမကြာခဏအပြည့်အဝဖြေရှင်းချက် anneals ဖြစ်ကြသည်။
ပုံမှန်တည်ဆောက်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာသံမဏိအချို့ကိုအသုံးချသည်၊ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်သည်ပစ္စည်း၏နဂိုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ပျော့ပြောင်း။ မာစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည်။ ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြိုတင်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုတန်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လှိမ့်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောလက်ရှိ Non-uniformstructure ကိုစက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောကုန်ပစ္စည်းပုံစံများတွင်နောက်ဆုံးစက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသံမဏိကိုအအေးခံရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာနောက်ပုံဖော်ပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်မာကျောသောလည်ပတ်မှု (ဥပမာ - ရှုထောင့်တည်ငြိမ်မှုကိုကူညီခြင်း) အားကျေနပ်လောက်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်လျော်သောသံမဏိကိုအပူချိန် ၈၃၀ မှ ၉၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးသည်။ (ခိုင်မာသောသံမဏိများ၏အပူချိန်တွင်သို့မဟုတ်အထက်တွင်သို့မဟုတ် carburising သံမဏိများအတွက် carburising အပူချိန်အထက်) နှင့်လေထဲတွင်အအေးခံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အပူကိုလေထဲတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်စကေး (သို့) အကာအရံပြုလုပ်ထားသည့်အလွှာများကိုဖယ်ရှားရန်နောက်ဆက်တွဲစက်များသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်များကိုလိုအပ်သည်။
လေထုခိုင်မာစေသောသံမဏိများ (ဥပမာ - အချို့သောမော်တော်ယာဉ်ဂီယာသံမဏိများ) သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ဆောက်မှုကိုပျော့ပြောင်းပြီး / သို့မဟုတ်စက်ယန္တရားပြုနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးနောက်“ အပူအအေးခံခြင်း” ကိုမကြာခဏ“ တင်းမာ” ကြသည်။ အတော်များများကလေယာဉ်တင်သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်းကုသမှုဤပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသံမဏိများသည်လေအေးအအေး (ဥပမာအားဖြင့်ကိရိယာသုံးသံမဏိများ) တွင်သိသိသာသာခိုင်မာစေမည့်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများမရသောသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ - သံမဏိများ) ကိုထုတ်လုပ်သောစက်များဖြစ်သည်။
PWHT စက်ကို preheating ပြုလုပ်သည် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေခြင်းစသည်တို့ကို pip / tube weld peheat နှင့် pwht တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ဘွိုင်လာကဲ့သို့သောဖိအားပေးစက်များကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရည်ပျော်သောရေကန်၏အပူချိန်မှာ ၂၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ အပူတိုးခြင်းသည်လျင်မြန်ပြီးချက်ချင်းဖြစ်သည်။ ဤသွန်းသောရေကန်ငယ်လေး၏အချပ်များသည်အအေးကိုအေးသွားသောအခါသတ္တုအတွင်း၌သော့ခတ်ထားသောအပူဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
PWHT သည်ဤသက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အပူပြောင်းလဲခြင်း၊ စိမ်ခြင်းနှင့်ဂဟေareaရိယာအားထိန်းချုပ်ထားသောပုံစံဖြင့်ပထမပြောင်းလဲခြင်းအမှတ်အောက်ရှိအပူချိန်သို့ makro ဖွဲ့စည်းပုံကိုမူလအခြေအနေနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသောဖိအားကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကိုပေးသည်။
PWHT သည်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်သတ္တုအပူကိုထိန်းချုပ်သည့်ပုံစံဖြင့်ပထမဆုံးအသွင်ပြောင်းသောအချက်မှအောက်သို့အပူပေးသည်၊ ထိုအပူချိန်ကိုအချိန်အကြာကြီးစိမ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောနှုန်းများဖြင့်အအေးပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
induction အပူ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသော်လည်းလူကြိုက်များမှုရရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ပိုဂဟေဆော်ဖော်ရွေဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ခုခံမှုအပူနှင့်မတူဘဲပိုက်သာပူလာသည်။ အပူချိန် gradients အထူကိုဖြတ်ပြီးယူနီဖောင်းဖြစ်ကြသည်။
အပူစွမ်းအင်သည် 10KW မှ 120KW မှဖြစ်သည်
မော်ဒယ်: 10KW, 20KW, 40KW, 60KW, 80KW, 120KW စသည်။
အပူအပူချိန်:0~ 900 ကို C
အပူချိန်အမြင့်ဆုံး: 900 C
ပိုက် / ပြွန်အချင်း: 50 ~ 2000 မီလီမီတာ
အပူကွိုင်: ညှပ်ကွိုင်သို့မဟုတ်သော induction heating စောင်
အဆိုပါ induction ဂဟေ preheating စက်ပါဝင်သည်:
1. induction အပူပါဝါအရင်းအမြစ်။
2. SOFT သော induction အပူ cable ကို
4 ။ K သည် type ကိုဒါး
၅။ စက္ကူ / စက္ကူမဲ့သောအသံဖမ်းစက်စသည်။
4. ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှု၊ လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: induction စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစက်ကိုဝယ်ကြလော့, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ induction အပူ, သော induction စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, အပူပေးစက်ကိုလျှော့ချသော induction stress, စျေးနှုန်းသက်သာ induction စိတ်ဖိစီးမှု, induction စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာဖြစ်စဉ်ကို, induction စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာခြင်းစနစ်, သံလိုက်သော induction စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်အပူပေးစက်, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာစနစ်က post navigation